မြန်မာ လေယာဉ်ပျံ တရုတ်ပိုင်နက် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိ
ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့တွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် မြန်မာ အစိုးရ လေယာဉ်ပျံတွေ တရုတ်နိုင်ငံ ပိုင်နက်ထဲ ဝင်ရောက် ပျံသန်းခဲ့တယ် ဆိုတာ မဟုတ်မမှန်ပါဖူးလို့ တရုတ်လေတပ် က ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
တရုတ်လေတပ်မတော်ရဲ့ စနေနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ မြန်မာနဲ့ ကချင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြား ပြဿနာတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ချိန်ကစပြီး မိမိတို့လေတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ တရုတ်-မြန်မာ နယ်ခြားဒေသကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ထောက်လှမ်း စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာလေယာဉ်ပျံတွေဟာ တရုတ်ပြည်ပိုင်နက်နဲ့ ၅ ကီလိုမီတာအထိပဲ ချဉ်းကပ်ပျံသန်းခဲ့ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာလေတပ်က ကြဲချခဲ့တဲ့ ဗုံး ၃ လုံး တနင်္ဂနွေနေ့က တရုတ်ပိုင်နက်ထဲ ကျရောက်တဲ့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက မြန်မာအစိုးရကို သောကြာနေ့မှာ သတိပေး ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး နောက်တရက်မှာ တရုတ်လေတပ်မတော်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် အခုလို ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
နေရပ်- yin jang (china)
china is always completely cover for xxx Burma military
If Burmese planes did not come near Cina border, why did the Foreign Office spokesperson said3bombs dropped on Chinese territory? Who to believe, the Chinese Foreign Ministry or the Chinese Air FOrce?
Jan 06, 2013 11:14 AM